महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटाकाे उपन्यास : चम्पा (भाग – दुई) | साहित्यपोस्ट
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा	 प्रकाशित १४ मंसिर २०७८ ००:०१
कान्तिपुरको जनसङ्ख्या विचित्र तवरले बढिरहेछ । विदेशीको त्रासलाई उनले गढी राखिदिएकी छन् । स्वदेशीतर्फबाट पहाडमा जीवन र उपार्जनको प्रयोग हुन्छ । जब पहाडी प्रयोग सफल भएर मोटाउँछ, मानिसहरू कान्तिपुरीको दोसाँधको टिपकारीदार घर सम्झन्छन् । मैतीदेवीको फाँट हामीले देखुन्जेल लोभलाग्दो हरियो थियो । पशुपति बुढाको महान् उदरपूर्तिलाई भक्तगणले खडा गरी राखिदिएको धानबालीको ठुलो फैलावट थियो । पुलदेखि खरीको बोटसम्म वनस्पतिको विस्तृत साम्राज्य निष्कण्टक देखिन्थ्यो । कुन चाहिने राजा हुन् पशुपतिलाई बराबर बेइज्जत गर्छु भनेर गाली दिँदै आउँथे रे र विचित्र बुढा बाबाको प्रभावले तर्सेर हच्केर “बुढो धोबी त्यसलाई मैले जान्या छ, पख् भोलिको दिन’’ भनेर फर्कन्थे भन्ने भनाइ छ, जसले रुद्रमती (उत्ताउली, डरलाग्दी, चट्टानकटुवै रुद्रमती) धोवीखोलाको नामले नेपालमा प्रसिद्ध भइन् रे । उनको खाडीमा जलेको उपजदार क्रियाले पशुपतिबाबालाई वेश बाली उमार्ने र उपभोग गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो । धोबीखोलाले चट्टान काटेर वाणेश्वरको पयर चुम्दै पूर्वपट्टि बडा सुन्दर, विचित्र शिल्पकारी तयार गरेकी छन् । जुनेलीको जाग्रतका दिनमा सौन्दर्यका विहारीहरूको झल्कने बालुवाको सिताराले झलमलाउँदी वन बगैँचाले सदा लहलहाउँदी निर्मल कलकले धोबीखोलाले पानी-पटाइ तथा जमिन तयारीको काम यति राम्रो देखाएकी थिइन् कि यो जग्गा अति रमणीय देखिन्थ्यो । भण्डारखालको पशुपतिनन्दनको पश्चिम पर्खालको गेरु घेरामनि विशाल फाँटमा मानव शिल्पकलाले आक्रमण गरेको थिएन । केवल सरकारतर्फबाट बिरुवा लगाइएको इँटघेराले सिँगारिएको मैतीदेवीको मूल सडकले मात्र खाडीको विशाल वक्षस्थलबिचमा चिरेको थियो ।
तर अब यस समयमा (जसको हामी उल्लेख गरिरहेछौँ) यस फाँटका किनारामा मानवको कृत्रिम सभ्यताले इँटका ढेरीले आक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो । यस फाँटमा बनेका पहिला घरहरूमध्ये एउटा घर थियो रमाकान्त अधिकारीको ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटा
उनी पूर्व तीन नम्बर ओखलढुंगाका थिए । ओखलढुंगा कविको चाहिनी अर्कै छ । पहाडी प्रकृति सुन्दर कहाँ होवैनन् ? तर ढुंगाका चोसेमोसे घर, जाली खड्का र चतुरे काकीहरूको ज्यादा जमात भएको वेलामा, पं. रमाकान्त अधिकारीले एकबाजि त्यहाँ बाजीमात गरेका थिए । जग्गा पोल्ने काम त्यस समयको सरकारबाट आश्वासित कम्र्म भएकोले एक जालीसँग मिलेर उनले यस काममा प्रशस्त सफलता हासिल गरेका थिए । त्यसपछि सर्केर उन्नति भयो उनको । कागत बनाउने काममा हात हाले । महायुद्ध उनको निमित्त खराब समय थिएन । पैसाको छेलोखेलो भयो । तब राम्रो व्यापारमा हात हाले र कान्तिपुरीको संभावना परीक्षा गरुँ भन्ने मनसायले उनी मैतीदेवी फाँटमा आएर घर बनाएर बसे । पहिले त उनलाई धेरै धोखा मिले । एक जना माष्टरबोजेको भर पर्दा झण्डै खोलामा परेका थिए । भाग्यले बल्लतल्ल बाँचे । नेपालीहरू ग्जबका छट्टू हुँदा रहेछन् । कुराकानी त के भन्नु खै ?…. आकाशले फूल टिपिहाल्ने पो पच्चीस हज्जारको काम उठाएको पन्ध्र हज्जार ता ओठै ओठले पो चपाइदिए । बल्लतल्ल चालामाला बुझेपछि दश हज्जारसम्म बचाइयो । नेपालमा गफीको फेला पर्न हुँदो रहेनछ त ! पहाडमा पचास हज्जारसम्म जमाएका पहाडी राजा बनेका पं. रमाकान्त नेपालमा पहाडी अँडीर बनेर विचार गर्न लागे कि जोगाउनु पनि कमाउनु हो । ठूलो हाँगो पक्रेर जोगिएर बस्नु बस कान्तिपुरीको जीवनको जादूमन्त्र उनले सिके । धुरी बढाउने विचार अलि मसाँग्रिएको थियो । ठूलाको आँखी पर्न हुन्न भन्ने होशियारद्वारा उनलाई एक मित्रले रवाफको भाँडामा ठण्डा पानी हालिदिएको थियो । बराबर राजाको लेण्डो बग्गी प्रधान धुरी अगाडि अडेदथ्यो रे । ठिक्कको रवाफ नराखी त भएन । नत्र नेपालेहरू पहाडिया भनेर यति साह्रो हेलाँ गर्दैनन् पो ! च्वाट्ट समाजैमा एक लरीले बोक्ने घर रे ! “मुखिया ढिँडो रे !’’ तीते फापरको कथा रे । बित्पातका पो हुन्छन् नेपाली ठिटाहरू त ।
पं. रमाकान्तले राजाको चाकरी गर्न लागे । धेरै दिन फूसफासमा चल्यो । बिर्ताबारी जोरेकोले खान त दुःख भएन तर जागीर, मान, बढतीको पुत्लो पनि पो भएन त । आखिर जब दरबारमा तीन नम्बरेहरूको चकचकी बढ्यो, तब उनको पालो आयो । उनी पहाडबाट यता झरेका ठालू बूद्त सबसँग राजासँग भएका कुरा जुँघाको ताउ लाउँदै सुनाउन लागे । रवाफ पनि बढ्यो । कमाडचीफको पेवाको बन्दोबस्त उनले पाए । दुई चार यस्ता हात लगाउन पाए केको दुःख ए ? …… व्यापारमा भने अघोरै बाठा पो रान् बा नेवारहरू त नेपालका ! बाहुनहरूको के टिकाउ थियो र ? एउटा बाहुन सप्र्‍या देखिएन बा ! ग्वालियरमा भोटे वस्ताद गा जस्तो ।
अब छोराछोरीहरूलाई अंग्रेजी पढाएर दरबारमा घुसाउनुपर्छ ।
उनको जेठो छोरो उमाकान्त अधिकारीको बिहे भइसकेको थियो । पहाडी पोखरेलकी छोरी थिइन्, धम्मरधूस । तीनौटा पोइलाई फ्याँक्न सख्ने अब । मापाकी ! चाकार्नीलाई ढुस्याएर तहलाउने अब । काम पनि भन्नै नपर्ने, स्वाइँ स्वाइँ मस्यौटा, चाइँ जाँतो, भ्याङ्लाङ् भ्याङ्लाङ् ढिक्की …. तर रिस उठ्यो भने मार्न पनि बेर नलाउने । सासूलाई पनि अटेर्ने अब त्यस्ती मापाकी बूढी । उमाकान्त अधिकारी……. त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान पढ्दथे । माहिलो छोरो भीमकान्त अधिकारी यस साल प्रवेशिका पास गर्ने भएको थियो । उसको पनि बिहा भएको थियो । बुहारी ठूलाकी छोरी थिइन् । तर यति सुकुमारी, यति पंपा, बयान गरी नसक्नु । एक दिन मस्यौटो पिसे, तीन दिन थला पर्थिन् ……. ।
साहिंला छोरो रामकान्तलाई प्रकृतिले अलि कम निगाह गरेकी थिइन् । उसको मुख केही बांगो थियो । ओखरको बोटबाट लडेर बायाँ गालामा चार अंगुलको खत परेको थियो । मुखभरि मखिबुट्टे चायाँ, डंडीफोर तथा चिरिएको चिउँडो, गाला लिपिक्क, हाड टंग्रं∙, आँखा च्याँसे । तर अघोर ठाँटिनु पर्ने उसैलाई । प्राकृतिक आकर्षणको कमीको चेतले नौजवानलाई आत्माको दोस्रो बोक्रो, परिधानतर्फ ज्यादा जोडदार आश्रय लिन लगाउँछ । रामकान्तको तलाश एक घण्टाको हुन्थ्यो । डण्डीफोरका चोसामा हेज्लिन स्नोको हिउँ बुट्टा- सेता कोठीका रमाइला स्वरुपमा लागेका देखिन्थे । भौं छाट्नुपन्थ्र्यो । नेपाली बाबुसाहेबका देखासिकीमा लिपस्टिक दल्ने आदत लिएका थिए । रामकान्तको चर्तिकला भनेपछि डिल्लीबजारमा मशूहर छाँट थियो । बाटुकल्ली पपलिन ग्रीष्ममा, भेला हिउँदमा- अथवा कश्मीर ! मान्छे च्याण्टे ! कालो कोटकश्मीराको या जमोठको आङमा नचढाई, निख्खर कालो बलि चाहने महाकाली झैँ उनी प्रसन्न रहन सक्तैनथे । आँखा कमजोर नभए पनि उनी चक्षुविषेज्ञकहाँ पुगेका थिए ।
“के हुन्छ बाबु ?’’
“के के किरकिर लागिरहन्छ । धमिलो दृष्टि छ ।’’
“ह्या ! बाहुन म त ! के भन्या ?’’
“हँ ? …… कलकत्ता जानुभा छैन ? पहेंलो त नजरको औषधि, त्यसको, बुझ्नु भएन ?’’
“होला तर हांले खानु कसरी नि ? …… भान्सां उकाल्छन् र ?’’
“व्यक्तित्व चाहिन्छ ….. त्यति लुकाएर खान नजाने के काम गर्नुहुन्छ त दुनियाँमा ?’’ ……
“फेला पर्‍योभने ? मारेन ?’’
“के गर्छ त ? …….. प्रायश्चित्त छ नि ……… चश्मा लाउने ?’’
“तब के गर्नु त ?’’
“शून्य पावरको लिनोस् न त । के ? ……… ल यो फस्ट किलासको क्रुक्स । असी रुपियाँ ।’’
उनको चौचश्मी व्यक्तित्व बाराटमा ठम्ठमाउँथ्यो या पांग्रामा बग्थ्यो । अलकत्राको माग गरेर- जसको अभावले उनी नेपाललाई गाली गर्थे …… सिंहदरबारको सडक रे- छीः छीः छीः कति खडखडा ……. नदीको ढुंगा छुसमुसेले पेल्या हेरन । हामी बाग्मतीको बाटो हिंड्छौं नि बरु । ईश्वरले बना, छैनन् बाटो र ? जलले पेल्छ बरु ए ! उखु पेलेझैँ सडक पेलेर हुन्छ ? हर्निया हुन्छ रे ? किन हुँदैन त नौजवान साइक्लिस्ट्लाई ? कति गरीब सरकार । ….
“त्यत्रो सिंहदरबार बन्य के काम लाग्यो ल ? गडी ओल्र्या जस्तो पो छ बिलकुल । अलकत्रा त किन्न सक्तैनन् यिनीहरू । यस्तै हो शहर बन्य ? नेपालमा म्यूनिसिप्यालिटीले के गर्छ ? गांजा खाने जागीर दिया त होइन ?’’ इत्यादि ……… नौजवानहरू आफ्नो सुविस्ता (शारीरिक या मानसिकद्वारा) सरहनी या बदख्वाइँ गर्ने गर्दछन् ………
उनी आर्दश रमणी चाहन्थे । साथीहरूसँग गफ हुन्थ्यो । “म ता च्यान्टा मान्छे ⁄ मैले बिहे गरेंभने त चीनीया मैयाँ, बुझिनस् कि ?’’
एक साथी भन्थ्यो, “हँ ? साँच्ची पटनामा कस्तो म छकिया बाबै ! किङकार्निभलमा यसपालि ! जापानी लेडी रहिछ बा ! नेपाली जस्तो लागेर, होइन, दि ! काँट आ’ हँ ?’’ भनेर च्याट्ठ बोल्या त, ए “चाङ वाङ चुबु कारु कानवान’’- गरी म ता सुइँकुच्चा ठोकें बा ! हाँस्दा हाँस्दा हैरान । कस्तो ठीक्क गुरुङसेनी जस्ती हँ ?’’ …….
आर्को भन्थ्यो, “बाहुनको छोरो भएर किन जन्मिस् त ? तिमीहरू मंगोलियन् जातिलाई अत्यन्त हेलाँ गर्छौ, वा तँ एकजनाले जाति मिलाउन लागिस् के कसो ए ?’’
रामकान्त तब जातिकलहको निरर्थकता तथा अन्धताउपर व्याख्यान छाँट्न लाग्थे । उनलाई चीनीया च्यान्टा नै चाहिन्छ । जापान जाने सुर छ । चाङ-काइ-शेकसँग एक दिन हात मिलाउनु थियो । “हरियो आँखा त भन्दिनँ, तर थेप्चो नाकलाई भने त सरहनी बा ! रोगन सुन जस्तो, कपूर जस्तो होइन ।’’
यस्तो कुराकानी, जापानी बङ्लो, इत्यादि विषयमा हुँदै थियो । जापानी, चित्रपटमुताबिक बुढानिलकंठ वा सुन्दरीजलमा ठाउँ खोज्ने कुरा चल्दै थियो । खूब विवाह विषयको गफ हुँदाहुँदै रामकान्तले देखे कि जीवनको ठाट कल्पना मुताबिकको हुँदैनथ्यो । बाबु, आमा, घर, जाति, परिस्थिति यी कंटहरू ! “मैले देख्नु न सेख्नु वाह ! बिहे रे ! कति मज्जा कुरा ? जाँतोसँग जेठो दाज्यूले बिहे गरे । फूलपुतलीसँग माहिला दाज्यूले बिहे गरे, अब म कोसँग….. बाँससँग कि ढोइसँग ? उनको त खुट्टा मिच्ने मान्छे जोर्ने कुरा छ । मेथी चँशूरको सँगी सासूलाई चाहियो भनेर हामीलाई आँखा छोपेर देश घुमाउने ? कुल रे ? …… पैसा रे ? पाथी भुस ! आफूभन्दा ठूला छोरी घर हेलाँ गर्छन् । काम गर्दैनन् । गरीबले घरको संस्कार घर्काउँछन् । आधार लिनुपर्छ बनोटको पो । के यो जूवा खेल्या हो र ?’’
यस्ता तर्क-वितर्कमा रामकान्त बाबुले बिहाको चल्दो कुरा सुने । उनीलाई अलिकति रिस उठ्यो कि ठिटाहरू भनेर बाबुआमा जीवनारम्भीको कति कदर देखाउँछन् ।
उनले बुझ्ने, हेर्ने, अनुभव गर्ने विचार गरे । अंग्रेजहरू कति बेश ! प्रेमको बाटो त रोक्तैन् । यहाँ प्रेम भन्ने चीज नेपालो र हिन्दुस्तानीको कुनै पुस्तकले सच्चा तवरले अनुभव गरेन । “हरूको आँखा, हाम्रो जिन्दगी, वाह ! ………. हामी पुतली होइनौं क्या र ? अथवा चल्ला चल्ली ! ज्यापूले मोटो चल्ला मोटी चल्लीको ह्याकुलो छामेर एकै खर्पनमा हालिदियो, बस, फुल पारिहाल्छ नि मजाको ।’’
रामकान्त नवम श्रेणीमा पढ्दथे । खूब जेहेनदार थिए । खूब परिश्रमी पनि । उनको गुण्डोपन केवल बोक्रे थियो । तलाश, स्नान, पोशाकलाई प्रशस्त समय बिते पनि उनी व्यभिचारका विरोधी, चरित्रका पक्का, जेहेनका तीब्र, आँखा र कानका चलाख थिए । उनले प्रशस्त अंग्रेजी उपन्यास हेरेका थिए । प्रेमको रहस्य मैले जतिको अरूले जानेको छैन भन्ने उनको अन्तर चैतन्य थियो । भावी पत्नीको आदर्श उनले बनाइसकेका थिए । उनसाई अब कस्ती होला भन्ने समस्याले घनघोर बाधा गरिरहेको थियो ।
“कन्या अत्यन्त उम्दा छन् बाबु ⁄ लाखमा रोजा ।’’ आमा रमादेवीले भनिन् । “को नि त्यस्तो समालोचना ल्याउने ? आलुपसलले भैंचालोको सवाईलाई कालिदास ठान्या जस्तो । पित्तको आँखामा मान्छेले जाँच्या बालुवा सब सुन सुन ।’’
“होइन आमाले संझाइन्, सबले हेरिसकेको, बाबु ! तिमीहरू मात्र आँखा भा’ छौ, अब दुनियामा ? अरूका आँखा छैनन् क्या र ?’’
“अँगार, अँगार अरूका आँखा ……. काँच अरूका नजर, आमा ! तपाईलाई राम्रो लागेर हुन्छ ? फरिया लिने बज्यैले भनेर हुन्छ ? बूढाथोकीको वचनले हुन्छ ?’’ रामकान्त जाग्यो ।
“अझ अप्सरा जस्ती खोजेर झन् होला कि त भन्यो झन् मसँग पो जाग्न आउँदो रहेछ, नाथु ! जान त, तँ आँफै खोजेर ले ।’’
यति वचन सुनेपछि रामकान्तलाई कन्या नराम्री रहिछन् भन्ने त भएन । अप्सरा जस्ती ! फस्ट किलास ! लाखमा रोजा ! बेश ……… तर ती बकहरूलाई अप्सराको कल्पनै छैन ! …….. अस्तु ! ………….
रामकान्तले कन्या हेर्न जाने निश्चय गरे …….. साथीको मोटर साइकिल मागेर भडभडाउँदै वाग्मतीपारि पुगे । एक पसलमा मोटर साइकिल राखेर सिगरेट किने । हेर्न भाडा पसलेलाई दिए र श्रीकान्त सुब्बाको घरको बोटो सोधेर अन्दाज गरिएको वरिपरि एक चक्कर लगाउन थाले । घरको पछाडिपट्टि पुग्नासाथ उनले होचो पर्खालबाट साना साना ठिटीहरू खेल्न लागेका देखे ।
बगैँचा रमणीय थियो ……. सुन्तला, हलुवावेद, भोगटे, मोसम, इत्यादिका प्रशस्त रुखहरू थिए । जाईका झांगहरू पनि देखिन्थे । एउटा ओखरको हाँगाबाट डोरी झुण्ड्याइएको थियो । काम्रो भएको मोटो पीङ मच्चाउने काममा ठिटीहरू सोरसराधमै दशैंको पूर्वस्मरण गरिरहेका थिए ।
एक ठिटी भन्न लागेकी थिई “दशैमा ता चम्पानानीको बिहा बाबै !’’
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटाकाे उपन्यास : चम्पा (अन्तिम…
लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटा	 २८ मंसिर २०७८ ००:०१
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटाकाे उपन्यास : चम्पा (भाग – तीन)
२१ मंसिर २०७८ ००:०१
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटाकाे उपन्यास : चम्पा (भाग…
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा	 ७ मंसिर २०७८ ०८:५०
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा	 १ आश्विन २०७८ १६:११
आर्कीले उत्तर दिई, “अँ ? हो ! ………. दधैंमा बिहे गर्छ कोही ?’’
तेस्रीले भनी, “त्यस्तो कुरा गरे हामी यहाँ खेल्दै न खेल्ने ! बुवालाई बिन्ति चढाएर पीङ काट्न नलाईकन, पख ! नकच्चरीहरूहो !’’
रामकान्तले पर्खालको प्वालबाट चियाएर हेरे । ती तेस्री केटी उनीतर्फ सामुमा फर्केकी थिइन् । तिनको नाम चम्पा रहेछ ।
रामकान्तले आँखाले परीक्षा गर्दै मनमनै भने, “चिनिया कदको भन्न त अलि सुहाउँदैन, बा ! यिनी जरुर बढालू छन् । अग्ली गोरीमाको हुन् । भेनेशियन सुन्दरी ! ……… यो ककेसियन् टाईपकी । म चाहान्छु आफू जस्ती च्यान्टी ।
पहेंली यति छेपाराले चुसे जस्ती होइन । मसालाको बोटको जंघा होइन । राम्री त निक्कै राम्री हुन् । आँखा अलिकति डेडो रहेछ । नाक बिलकुल आर्य भन्न सकिन्न । नेपाली आबहवा । तर खाने मुख ता खूब हिसीलाग्दो हो । केश पनि आर्य दृष्टिले ता उत्तम । मेरो च्यान्टा आदर्श भए त खासा हो, हुने हो-तर । मलाई डर लाग्छ यिनी हलक्क बढनेछिन् । अनि भर्‍याङको उखान पर्‍योभने । रतौलीमा खियौटे पोइ भनेर खिसीमा जानुपर्नेछ । म उनको कानसम्म पुग्ने भएँभने या काँधसम्म ? मजा हुन्न बा ? टिमिक्क च्यान्टा । त्यस्तो भयो बेखतरा बा । मलाई डर लाग्छ यिनी हलक्क अग्लिन्छिन्- मलको मूला जस्तो के गर्नु ? ……. चीनीयाचम्पा खिल्दो मुसमुसे । अच्छा ! बेश रहिछन् तर विचारणीय ।’’
यस्ता विचारका साथमा उनी हेरिरहकै थिए । चम्पाको आँखाले पर्खालको प्वालमा दुई आँखा देख्यो । उनी चाल मारेर एकातिर पसिन् र एउटा ढोड लिएर चट्ट बदमाशीसँग प्वालमा घोचिदिइन् । बल्लतल्ल रामकान्त आफ्नो आँखा बचाएर त्यस ठाउँबाट भागे । ठिटाउरु(अक्सर नेपालमा) विचार गर्दछन् कि सर्वोत्तम कन्या पाउनु उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार हो । नवयुवकको व्यक्तित्वमा सबभन्दा प्रधान गुण हुन्छ आत्म-प्रशंसा । नार्सिसस् सबमा जागा रहन्छन् । अक्सर ठिटाहरू आफ्नो अदब, संस्कार, शिक्षा, भविष्य, उपार्जनको सामथ्र्यउपर ज्यादा जोड दिँदैनन्- आफ्नो असौन्दर्य त उनीहरूबाट बिलकुल छिपिरहन्छ । पोशाक, नौजवानी, ढाँचाकाँचा, चस्मा-कोट इत्यादिद्वारा उनीहरू आफ्नो अदब, संस्कार, शिक्षा, भविष्य, उपार्जनको सामाथ्र्यउपर ज्यादा जोड दिँदैनन्- आफ्नो असौन्दर्य त उनीहरूबाट बिलकुल छिपिरहन्छ । पोशाक, नौजवान, ढाँचाकाँचा, चस्मा कोट इत्यादिद्वारा उनीहरू आफ्नो व्यक्तित्व बनाउँछन् र त्यसैलाई व्यक्तित्व भनेर पालन गर्दछन् ।
यसरी रामकान्तलाई थाहा थिएन कि कन्या उनीभन्दा धेरै गुनामा लायक थिइन्, उनीभन्दा धेरै गुना असल व्यक्तित्वका निमित्त । तर उनले चम्पालाई आफू योग्य हुनुभन्दा कति मात्र तल माथि परेकी होलिन् भनेर ग्राह्मताको हल गर्नको चिन्तामा घरतिर कदम फर्काइरहेका थिए ।
सुवासिनी मान्छेका जोड जिद्दीले चम्पा र रामकान्तको बिहा भयो । दुलही बिहाको दिन खूब रोइन् । भात खाइनन् । घरमा पनि भोलिपल्ट बिहानसम्म सुँक्क सुँक्क गरिरहेकै देखिन्थिन् । जब दुलाहा बाजे रामकान्त पोशाक उतारेर भान्सा घरतर्फ रवाना भएका थिए, दुलहीले आफ्नो दुलाहाको शारीरिक सौन्दर्यको भेद पत्ता लगाइन् । “छाती’’ उनले विचार गरिन्, “डमरुको छाला जस्तो सुक्यारहेछ । परेवा छाती रे त्यस्तो बाङ्गेकाे हाड उठेको ……… हाम्रो बुबाले भन्नुहुन्थ्यो । आङभरि छिः के विधि डंडीफोर होला । ……….. सब पाक्या छ … कस्तो फोहोरी मान्छे होला छिः । ……. गालामा के त्यति लामो खुकुरीले काट्या जस्तो अथवा भालूले चिथोर्‍या जस्तो ? ….. च्यान्ट घोडा भनेर जस्तो गिज्याएको हो ? … नामै च्यान्टी भइसक्यो आर्का ! कति सानो मान्छे होला ? चिमिरे ! भँगेर ……. काखी गन्हाएर वाक्क आइरहेछ अझ ।’’ दुलहीले गरेकी थिइन् त्यस बिहान । दुलहादुलहीलाई एकै ओछ्यानमा त्यस रात सुताइदिएका नन्द, आमाजूले । रातभरि दुलहीलाई निद्रा लागेन । शरीरको गन्ध कुनै मान्छेको, वाफै, तातै नै कस्तो कस्तो पेट उमठ्ला जस्तो ……… दुलहीलाई घनघोर घीन लाग्यो ।
जज्ञ, मंत्र, पवित्र बन्धन, लगनगाँठो वैदिक भए पनि हृदय वैदिक हुनुपर्छ भन्ने ब्राह्माण, गुरुज्यू, पुरोहितको भूल थियो । सफेद भूत !
चम्पा चाहन्थिन् केही आर्कै, पर्न गयो केही आर्कै । स्वीकारले कसैको व्यक्तित्व बन्दछ, कसैको बाँगिन्छ । चम्पाको सपना चकनाचूर भयो । कहाँ सिनेमा स्टार हुने भावना, कहाँ यो भङेरदेव ! बालकै भएपनि राम्रा मीठा सपना बराबर उनलाई आउँथे । उनले आफ्नो जेलजीवनको पहिलो अनुहार देखिन् । उनलाई घृणा लाग्यो पहिलोबार पाउको पानी पिउँदा, दोस्रोपालि वान्त भयो । तब दुलहान फर्काउनु ……… सोह्र दिनको भेटघाट ……… सासू अहिलेसम्म बेशै थिइन् । भोलि पर्सि ह्वाङग्राङ्गी खाइदिने पो हो कि ? ……… ज्येठानी कत्री ढोइ ! के बिघ्न धम्मरधूस……. शुद्ध कँठेनी …… कस्ती मापाकी । कस्ती वालँघी ! ए ! तर माहिली ज्येठानी कस्ती सुकुटी फेरि ! बिहा गरेको पन्ध्र दिन भा छैन माइतमा कुरा गरिसकेकी …… ए ! आँखा डेढो रहेछ रे आकाश पाताल देउरानी रे …….. मासुमा नून हाल्या चर्को कलबिख रे ….. ज्येठानीलाई तपाई भनिन् रे …. कस्तो ठाडो बोली रे ……. हजूर भन्न जान्या रहेनछ रे ….. घर त कुरौटे रहेछ बा……. लोग्नेले पनि के नाउँ राख्यो होला त्यस्तो कीचक रे …….. कीचक ता कोही सुवासिनीको नाउँ नराखोस् ए दुनियाँमा ? …. म कीचक जस्ती छु त ?
चम्पा, पुरोहित बाजेसँग सोधिन् माइतमा “होइन पुरेतबाजे ! कौचक भन्या के हँ ?’’
पुरीहितबाजेले संझाएका थिए, “कीचक भन्या एउटा भीमसेनले घन्ट्याएको कामी, एक हावामा आफै बज्ने बाँस…….’’ तर कीचक । कति नराम्रो नाम ? के नाम राख्यो होला ? … “म अग्ली छु भनेर बाँस जस्तो भन्या होला अब ?’’
“ज्यादा च्याण्टा घोडा जस्तो भए मन पर्दीहुँदा ।’’
यसरी १२ बाट १२ वर्षमा प्रवेश गर्दी चम्पा दुलहीको हृदयमा त्यस व्यक्तित्वदेखि विरोधका लहरीहरू उछालिन लागे जुन व्यक्तित्वले उनको छनाइको क्षेत्रबाट बाहिर रहेर उनलाई गाँजेको थियो । अति चुरोट, तमाखु खानुपर्ने … जुँघाको कथा कथा हाल्नु जस्तो ….. कति नराम्रो कैलो भुवा जुँघाको नाममा ……. असल असल मगरका नास्ति जूँघा न दाह्री ।
अलि मगर छाँटको……. थेप्चो नाक पनि ….. तलतिर फेरि पुट्ट पर्‍या …. मेरो हातले नाप्योभने पनि तीन हात पुग्दैनन् जरुर । ठाँट पार्नुपर्‍यो के विघ्न नि ! लुगा छोडायो कि भँगेरा भुत्ल्याए जस्तो इत्यादि- माइतमा पछि बज्यै अलि चुकचुकाइन् । “चम्पू !’’ उसले गाला मुसारिन् ।
“अलिकति तिमी सुहाउँदो भएन ।”
“अलिकति तिमी सुहाउँदो भएन हकि बा ! …. अब तिम्रो भाग्य यस्तै रहेछ । धन, पैसा, इज्जत, मान, सन्तान हो भाग्य भनेको ।’’
चम्पाको हृदयमा आफ्नो स्वामीतर्फको न्यूनताको भाव समर्थित भयो । उनलाई बराबर गाली गरेको, हियाएको वचनले रिस उठ्दथ्यो । तर उनको व्यक्तित्वमा यौनभावनाका चक्रहरू स्पष्टतासँग काम गर्न लागिसकेका थिएनन् ।
दुलहा-दुलहीलाई आमाबाबुले अलग राखे यस निमित्त कि रामकान्तको पढाइ बाँकी थियो तथा दुलहीको उमेर पुगेको थिएन । रामकान्त खूब पढ्न लागिरहेका थिए, रात-रातभर । पहिला हुने उनको सुर थियो । प्रवेशिकाको परीक्षाका लागि विशारदसम्मका सब चीज उनी तयार गर्न लागेका थिए । दोस्रो मनुष्य आफूउपर नहोस् भन्ने भावना राजा मन्त्रीमा मात्र हुँदैन, यो परिक्षाको संसारमा पनि विद्यार्थीवर्गमा पाइन्छ । प्रथम हुनुमा एक साम्राज्यको भावना सिद्ध हुन्थ्यो । रुपमा उनी पछाडि परेका थिए । भ्यागुतो जत्तिकै बौद्धिक सौन्दर्यको प्रतियोगिता थियो । शिक्षाको केन्द्रहरूमा । यसलाई ग्रीकहरूले पूजा गरेका थिए । आफ्नी सरस्वती काँचै थिइन् तापनि जुपिटर सम्राट्को ज्वालामुख साम्राज्य एक भारी विलास हुन्छ जस्तो नराम्रा पंडितहरू राजसभामा कायम गर्दछन् । उनलाई गौरीशंकरको मोहनी लाग्यो । यस संग्राममा म भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्छु । यस कुभावनामा परेका धेरै फोक्सा बिग्रे, धेरै कलेजा सुके । क्षयको कीटाणु मनुष्यभन्दा चंख हुन्छ त्यस बेला जब मनुष्यले बुद्धू हुने काम गर्छ ।
कीटाणुले भन्यो- “को घाममा कम बस्छ ? को हावामा ज्यादा निस्कँदैन यो शारदीय निर्मल समयमा, हँ ?’’ साना सर्पजस्ता काला सूक्ष्मवीक्षण यंत्रका अल्पजीवहरू जीवनको प्रतियोगितामा पहिला हुँला भन्ने आशाले हावा धूलोमा घुम्दै आए ।
बस, बिहा गरेको डेढ वर्ष हुनासाथ रामकान्त अधिकारीलाई डाक्टरले कालको वारण्ट दियो …… दुवै फोक्सा प्रभावित, भक्षित भयंकर धब्बाहरू …….. आयु चार महीना …… राम्रो औषधि व्यवहार नभए ।
रामकान्तले किताबहरू सल्काए । सब मास्टर, प्रोफेसरलाई भयानक गाली दिए । के यिनीहरूले हामीलाई पहिला हुन प्रेरणा दिएको यत्तिका निमित्त ? ग्रेजुएट भएका कति जीवनमा फेल खाइरहेछन् । बी.ए.मा विश्वास गराउनु के एक भयंकर धोखाबाजी होइन ? किन स्पष्ट भन्न सक्तैनन् तिनीहरू बढ्दो फुल्दो नयाँ पुस्तान नौजवान अगाडि, “हामीहरू बिलकुल महामूर्ख हौं । लवज बेचेर खाने हाम्रो यो चालाकी हो । हाम्रो पाठन कलामा विज्ञान छैन । हामी जीवन विकाशक होइनौं । हामी उदरपूरक हौं । हामी पाश्चात्य सभ्यताले युवक भांडेर खान्छौं, पछि गुरु तथा तानाशाहका पंजाबाट आत्मसंस्कार र संशोधन गर्नाको लागि । हाम्रो मोलतोल ठीक छैन । हाम्रो अंग्रेजी बिलायतमा बिक्तैन । हामीले दिएको व्याख्यान सुने लण्डन हाँस्नेछ । हामी वमनवेदान्ती हौं । हामी अक्षरकीट हौं । शोपेरहाँर साहेबले मात्र शिक्षकवर्ग- हामीलाई चिनेका छन् ।’’
हा ! म मूर्ख बंगाली विद्वत्ता र नेपाली बोक्रे प्रतियोगितामा बिग्रन गएँ ! म कस्तो मूर्ख !
उनको संसारले उलटपुलट खायो । उनले चम्पालाई बोलाएर भने, “प्यारी कीचक ! मेरो इतिश्री स्वाहा । व्यक्तित्व भए म मरेपछि पुनर्विवाह गरे । तिमी पढ । तिमीलाई पढन र बुझ्न व्यक्तित्व हासिल गर्नाको जरुरत छ । तिमीलाई म भुल्छु । तिमीसँग मेरो विवाहै भएको थिएन । म तिमीलाई प्रेमको आँखाले हेर्दिनँ । मलाई टि.बी. लाग्यो । धर्मले त्यो टि.बी. तिमीलाई सल्काउन खोज्दछ, चम्पा ! तिमी सक्छ्यौ, चाहन्छ्यौ भने पर सर । आजदेखि तिमी मबाट आजाद भयौ ।’’
चम्पा जानिनन् किन तर उनी रोइन्-बर्र । तीब्र सहानुभूतिले । साथीसँग छुट्टिने वेलामा राएझैँ ।……..
प्रेमको प्रारंभ भएको थिएन । केवल लोग्ने, पोइ या स्वामी भन्ने नामानुसार उनमा मान्नु पर्ने भन्ने भावनासम्म रहेको थियो । तर त्यो आँसुदार, जल्दो, जाग्दो, वियोग ज्वलित भाव, त्यो मधुर आनन्दको स्पन्दन, जो विकसित यौवनको सुगन्धको पल्कन हुन्छ- त्यो थिएन । न साधारण तवरले यस्तो चीज कुनै घरमा-कुनै सुवासीनी लोग्नेको विवाहित जीवनमा-पूर्वीय देशमा अक्सर-प्राप्य छ । विवाहलाई प्रेमको अन्त भन्ने पश्चिमा भनाइ त छँदै छ, तर प्रेमको शुरु नै नहुनु खास पूर्वीयता हो ।
रामकान्तले पुस्तक जलाएर जपमाला लिए । उनी शान्त, मौन रहन्थे । डाक्टर आउँथे, जान्थे, हेर्ने विचानहरू । आमाका आँखा हरहमेशा भिज्दथे । दिदी बहिनीका पनि । तर रामकान्त सारा पुरुष, स्त्री, घरबार, वस्तुलाई परदेशी ठहर्‍याए । अब उनको आत्मा ईश्वर-चिन्तनमा अविघ्न तवरल मग्न हुन चाहन्थ्यो । चम्पाले निकट वैधव्यको सपना देखिन् । उनलाई भयंकर विचारहरूले घचघच्याउन लागे । मौन वेदना आफैसँग एकलासमा बोल्न थाल्यो । उनलाई डर लाग्दथ्यो के होला ? ……..
एक किसिमको अस्पष्ट डर । वैधव्य ? ……. चुरा पोते नभएको । श्रृंगारहीन, कालो धागोले सजिएको पाउडरहीन, पहेँलो गोधूली मुहार वैधव्य-सेतो चन्दन र जपमाला लिएको वैधव्य ! जीवनमा उनलाई श्रृंगारहीनताको खतराभन्दा ठूलो अर्को खतरा जँच्दैनथ्यो ।
चम्पालाई बराबर के के उकुसमुकुस भएझैँ हुन्थ्यो-उनी बराबर मुठी बाटेर बटारिन्थिन् । अनि भुल्थिन् सब कुरा । अनि गीता पाठ गर्थिन् । अनि फेरि बगैँचामा गएर पक्क परेर हेरिरहन्थिन्- भँवरा र फूललाई । उनको चौधवर्षीय जीवन फल्दो भएर फुक्न लागेको थियो । उनको कमलकोमल मांसपुष्पबाट अझ अदूषित कुमारी सुगन्ध बहिरहेको थियो-शायद यो च्याखुराहरूको जुनेली चैतले बुझ्नसक्दथ्यो ! यस वेला, यस बैंसमा भँवरा मीठो हुन्छ ! कानमा मधुर प्रशंसा, त्यो थिएन । स्वामीजी टोखामा भर्ना भएका थिए । चम्पा केही वस्तुको अभावले चटपटाउँ थिइन् पनि । केही चीजको भावले सशंक पनि । उनको कसूरविना केही चीजसँग गाँसिएर उनको जीवनलाई पनि टि.बी. लागेको थियो ।
चम्पा सोचिन्, “के मेरो जीवनको सौगात यत्ति हो ? यो रुप, यो रंग, यो निशाना ?’’ स्वामीले बिदाइमा दिएको वचन उपर उनले गौड गरिन् । आजाद भयौ ! …… आजादी भन्या के होला ? … उनले एउटा केटाकेटीद्वारा माष्टरसँग सोध्न पठाइन् ।
उसले माने बताइदियो, “स्वतन्त्रता’’ । स्वतन्त्रताको पूरा अर्थ चम्पालाई थाहा थिएन, जस्तो धेरै स्वतन्त्रताको नारा लगाउने मनुष्यहरूलाई पनि ।
उनले बुझिन् स्वामीजले उनलाई अमलेख गरिदिएका रहेछन् । तर यो अमलेखीको माने चान्द्र शासनमा कमाराकमारीलाई थाहा नभएझैँ उनलाई पनि राम्ररी थाहा भएन । यो ज्यादा अस्पष्ट चीज थियो आग्राह्य ।
चम्पाले भनिन्, “चित्त दुखेर भन्या होला ।’’
त्यस दिन सिनेमा जाने प्रोग्राम थियो । चम्पालाई सिनेमा हेर्न झन्-झन् रहर लाग्यो । माइतीबाट प्रशस्त पैसा पाउँथिन् । उनी बराबर सिनेमा जाने बन्दोबस्त गर्न लागिन् । साथी सँगी भेट्टाइने । प्रेमीलीलाहरू राम्रा देखिन्थे । तिनको अभावमा रातभरि तकिया भिजाउँथिन् । श्री कृष्णको तस्बिर काखी च्याप्दथिन्, रुन्थिन् । तर उनलाई फेरि फेरि सिनेमातिरै जान मन लाग्दथ्यो । फिल्म-स्टार हुने वासना अभिनेत्री तारकाहरूको सौभाग्यमा मस्त हुन्थ्यो-कमसे कम तिनीहरू उच्च प्रेमको अभिनयसम्म त गर्न पाउँदथे । त्यो नाटकीय चित्रणमा यथार्थको रमरम आस्वादन त मिल्दथ्यो । बैंसालु कल्पना बराबर उत्तजेजना र पोषण पाउँथ्यो ।
यस्तै रीतसँग २/३ महिना बित्तै गए । बराबर मोटर भाडा लिएर टोखा जान्थिन् । रामकान्त बडा साँढ देखिन लागेका थिए । टाउको पनि ध्वाँक, गाला याहमान, शरीरै चौडा भएजस्तो, बोसो मात्र बढेको । उनलाई त्यस्तो नै देखेर चम्पालाई अलिकति सास आउँथ्यो-शायद बाँच्छन् कि ? तर उनलाई यस चीजले अत्यानन्दित-गरायो भन्न सकिन्न । उनी जीवनको चिप्लो अवाधि गति होला भनेर अलिकति प्रसन्न हुन मात्र खोज्थिन् ।
रामकान्तले माला छोडेर हँसी-दिल्लगी, तास, गञ्जीफा पक्रेका थिए । थोरै पढ्न पनि दिइएको थियो । दुलहीको चढ्दो उमेर र रुप उनका नजरले सिफरिश गरे । तर उनी त्यस बैंसको मोहनीदेखि त्रस्त भएर मनमन रोेए ।
१४ मंसिर २०७८ ००:०१
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाेटाकाे उपन्यास : चम्पा (भाग - एक)
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बहुचर्चित कविता - यात्री
कथा : अकथ्य